Maro tsy lanin'ny Malagasy rehetra raha ny Harena ankibon'ny tany eto amintsika.
1- Fitrandrahana vaventy: Ny Malagasy no mitrandraka ny Harena
Ho raisain'ny Fitondrana foibe avokoa ny fitrandrahana goavana eto Madagasikara, atsangana ny Orin'asa mpitrandraka sy ny indostria hanodina izany ho akora azo ampiasaina, tsy misy vokatra ahondrana ambongadiny.
Fitsinjarana ny petrabola (Capital)
- Foibe: 50%
- Faritra (3): 10%
- Malagasy rehetra na orin'asa Malagasy na orinasa vahiny mipetraka eto Madagasikara: 10%
- Vahiny: 30%
2- Fitrandrahana madinika sy salantsalany: Izay tompon'ny tany no tompon'ny harena ambanin'ny tany
Amoraina ary ampiana ara-bola ireo mpitrandraka madinika sy salantsalany. Omena fitaovana, esorina ny hetra rehetra amin'ny akora sy fitaovana entina mamokatra, ampiana ara-bola ka mamerina izany vola izany rehefa miakatra ny vokatra, ampiana ara-tekinika.
Atao toy ny an'ny Mpamboly, omena karama toy ireo Service National, ka rehefa miakatra ny vokatra dia mamerina ny 2/3 n'ilay karama voaray, misy kosa anefa ny fijerena raha toerana misy marina harena ambanin'ny tany ao amin'ilay toeram-pitrandrahana.
Hiasa ho an'ny mpitrandraka ny Service des mines sy ny Omnis, asiana laboratoire des mines isaky ny Faritra 3, ka kely ny vola aloan'ireo mpitrandraka madinika amin'izany.
Amoraina ny resaka fahazoana permis, na permis de recherche na permis d'exploitation na permis environnemental.
Foanana ny ONE fa ny ministera miandraikitra ny tontolo iainana no misahana an'izany. Averina any amin'ny ministera ny mpiasa ao.
Asiana guichet unique mandray ireny vokatra ireny toy ny volamena, sy ny vatosoa sarobidy.
Ny Banky Foibe no hiandraikitra an'izay fanangonana volamena sy akora sarobidy izay.
Hisy indostria lehibe kosa hividy ny vokatra amin'ny Banky foibe ka anodina izany ho akora azo amidy eto an-toerana na any ivelany.
Amafisina ny sandam-bola Malagasy amin'ny alalan'ireo volamena sy akora sarobidy ao amin'ny Banky Foibe ireo.
3- Service National: Omena ireo mpitrandraka solika, volamena, uranium, charbon de terre
Misy amin'ireo manampahaizana tafiditra amin'ny Service National sy ireo mpiasa maro dia alefa hiasa amin'ny toeram-pitrandrahana lehibe.
Tsinjovina manokana izy ireny amin'ny fahasalamana sy ny sécurité amin'ny asa. (Travaux des mines souterrains ou en mer)
4- Hiverenana ny fifanarahana amin'ny orin'asa mpitrandraka lehibe ankehitriny
Ho an'ireo orin'asa efa misy ankehitriny, dia hiverenana ny fijerena ny contrat minier, tsy ekena ny redevance 1% misy ankehitriny, ny fanjakana Malagasy no tompon'ny akora.
Mividy akora izy izany, fa tsy avy dia tompony, ka ho redevance no omeny.
Tsy ekena ihany koa ny fanondranana avy hatrany ny fotaka izay misy produits dérivés marobe ao anatiny, tsy maintsy eto amintsika no anaovana ny industrie hanodina izany akora izany.
5- Hatsangana ny industrie métallurgie vaventy
Ny Firenena matanjaka rehetra dia miainga avy amin'ny industrie lourde en métallurgie avokoa, hananantsika ny vy, ary anisany manana taux ferrique ambony isika, tsy hilaza afa-tsy iny faritra avaratra andrefana rehetra iny.
Atsangana izany ny industrie sidérurgie mpanamboatra vy, izay hifandray amin'ny port lehibe ao andrefana Antsohihy, port de Narinda, izay hisy nouvelle ville ary ananganana trano 500 000 logements, andray ireo mpiasa, mpandraharaha, mpizahan-tany, vahiny, sy ireo olona marobe amelona izany port izany, hisy zone de stockage off-short lehibe, tsy mandoa haba, ary industrie lourde izany.
Hisy ny Sampan'ny Secren hiasa ao, amin'ny fanamboarana sambo vaventy.
6- Pétrole - Gaz- Charbon de terre:
Maro ireo firenena miady an-trano amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany mikasika ny angovo, pétrole, gaz, Charbon de terre.
Ny vahiny no tena mampiady amin'io ary mampiditra basy antsokosoko mihitsy aza.
Miditra eo ny Tafika an-dranomasina sy anabakabaka hiaro ny sisintanitsika, omena fiaramanidina aigampandeha (efa noresahitsika, 2 isaky ny faritra 3, avaratra, afovoany, atsimo, ary sambo mpiady aingampandeha, ny bois de rose no ividianana azy).
Manana 1.7 milliards de baril, huile lourde, isika ao Tsimiroro fotsiny, izay azo trandrahana ao anatin'ny 25 taona. Ampiana ny Mada oil izay efa mitrandraka ao fa nahaton'ny mpitondra ankehitriny, izay nanome ny vahiny ny famatsiana solika avy any ivelany ho an'ny Jirama.
Atsangana ny raffinerie eto an-toerana.
Amboarina ny autoroute manodidina an'i Madagasikara, miampy ny lalamby manaraka ny sisiny atsinanana canal des pangalanes, izay iainga avy any Avaratra Cap d'Ambre ka hipaka any atsimo Androy Cap Ste Marie. Hisy ireo sampanana hampifandray ireo faritra misy toeram-pitrandrahana lehibe ireo.
Ny Faritra andrefana izany dia ho lasa zone industrielle minière et pétrolière, na an-tanety na an-dranomasina.
Ho trandrahana ny Gaz ao Sakaraha, ny Charbon de terre ao Sakoa atsimo andrefana.
8- Ny Nosy Malagasy
Antsika ireo Nosy ao amin'ny Canal de Mozambique ary dia alaitsika ny antsika, anisan'izany ny fiarovana azy amin'ny alalan'ireo sambo mpiady sy fiaramanidina aigam-pandeha izay ho vidiantsika.
Tsy misy fiaraha-mitantana io fa ny fifampiraharahana ara-diplomatika no atao, amaritana ny tetiandro hialany ao, sy hijerena ireo mpitrandraka solika efa misy ao.
Jerena izay Firenena lehibe afaka miaraka amintsika ara-diplomatika toa an'i Russie sy Chine hanery ara-tafika raha ilaina izany an'i Frantsa.
8- Fiarovana ny Tontolo iainana
Madagasikara dia tsy maintsy atao Nosy maitso, ka ny Malagasy rehetra dia tsy maintsy mamboly hazo 1 isan'olona, isan'andro, ao anatin'ny 4 taona, 1 500 fototra.
Mandray anjara betsaka amin'ny fiantohana ny zanakazo ireo mpitrandraka ny ala, ny mpanao éthanol amin'ny famarotana ny crédit carbonne, ireo mpiompy, satria manimba ny tontolo iainana ny biby, ary indrindra ireo mpitrandraka harena ankibon'ny tany.
Raha misy ala arovana nefa misy harena ankibon'ny tany ao anatiny, dia ny ala sy ny zavamanan'aina ao no arovana voalohany. Tsy avela ny vahiny kosa no hisahana ny fikarohana ao, satria matetika dia lasan'ny vahiny ny harena ao anaty ala.
Raha tsy maintsy kasihina kosa ilay ala, dia miantoka ny famindrana izany ny mpitrandraka vaventy.
Ny toerana avy notrandrahana dia tsy maintsy averin'ny mpitrandraka ho toerana azo hanirian'ny ala (réhabilitation extinction des mines), azo hanaovana site touristique.
9- Sekoly fiofanana
Apetraka eo anivon'ireo Oniversité 3 lehibe, atsangana amin'ny Farita 3, ny fiofanana manokana momba ny pétrole, ny harena ankibon'ny tany, ny raffinerie, ny fitrandrahana madinika, ny joaillerie, hofanina ireo mpitrandraka madinika, ampiana manokana ireo mpahay vato ao Antsirabe.
Ampiroboroboana ny fampianarana ny momba ny harena ankibon'ny tany hatrany ampianarana sy ho an'ireo mpitrandraka madinika.
10- Ady amin'ny Kolikoly
Anisan'ny sehatra feno kolikoly lehibe indrindra ity sehatry ny harena ankibon'ny tany ity, ankoatran'ny fampiasana ny carte électronique izay hifehezana ny fivezivezen'ny vola dia hisy mihitsy eo anivon'ny fitsarana anenjika, indrindra ireo mpitondra, mikasika ny resaka kolikoly, ho faizina mafy, sazy an-terivozina mandrampahafaty ary aseho vahoaka, izay tratra rehetra tsy ankanavaka, anisan'izany ireo Mpitsara manao kolikoly.
10- Tetibola sy entimanana:
Eo amin'ny 10 milliards de dollars eo ny tetibola heverina iaingana amin'ny fitrandrahana vaventy.
- Foibe: 50% = 5 milliards de dollars;
- Faritra (3): 10% = 1 milliard de dollars;
- Malagasy rehetra na orin'asa Malagasy na orinasa vahiny mipetraka eto Madagasikara: 10% = 1 milliard de dollars;
- Vahiny: 30% = 3 milliards de dollars
Apetraka ny Bourse de matière première, ka anisan'izany ny fivarotana ny tsenam-bola ho an'ny Mine sy ny industrie.
Ny petrabolan'ny Fanjakana foibe dia azo avy amin'ireo vokatra voahangona avy amin'ny mpitrandraka madinika sy salatsalany, ny redevance azo avy amin'ireo efa mitrandraka vaventy ankehitriny, ary ny redevance amin'ny bloc pétrolier sy ny volamena.
Ny Hetram-panjakana dia hiakatra avo 5 heny amin'ny alalan'ilay fampiasana Carte électronique, ka ny ampahany amin'izay fiakarana izay no akana ny 5 milliards de dollars.
Raha 5 000 miliara ariary ny vola miditra izao (15% hetra), 1,6 milliards de dollars, dia ho lasa 25 000 miliara ariary, izany hoe 8,400 milliards de dollars.
Io elanelana 7 milliards de dollars io izany no akana hampiasaina hitrandrahana ny harena ankibon'ny tany, ka ny Faritra no ampandrosoana amin'ny vokatra azo.
Ny Malagasy tsirairay ihany koa izany dia afaka manao petrabola amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Ny Fokontany, na ny tompon'ilay tany ampiasaina amin'ny fitrandrahana, dia lasa manana petrabola na actionnaire amin'ilay Orinasa vaventy, ka ny tany sy ny harena ao anatiny izany no petrabola ho azy amin'izany (Apport en nature - terre et ressource minière).
Ny vokatra rehetra azo avy amin'ny harena an-kibon'ny tany dia averina amin'ny Malagasy avokoa amatsiana ny asa sosialy rehetra, ny fanamboaana trano, ny sakafo, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny tanora, ny kolotsaina sy ny artista, ny fijerena ireo osa sy manana kilema, ny be antitra.
Ahena ny vidin'ny solika.